Pauro Mutsamba yokuvaRoma – 2hove
musha / Bhaibheri / mutsamba / Pauro Mutsamba yokuvaRoma
1:1 Paul, muranda waJesu Kristu, akadana sezvo mupostori, vakatsaurirawo Gospel yaMwari,
1:2 yaakanga avimbiswa kare, kuburikidza nevaprofita ake, muMagwaro Matsvene,
1:3 pamusoro poMwanakomana wake, akaitwa iye achibva kuvana vaDhavhidhi panyama,
1:4 Mwanakomana waMwari, uyo varongerwa nemhaka maererano neMweya weutsvene kubva kwevakafa, Ishe wedu Jesu Kristu,
1:5 watakapiwa nyasha nevuapositori, nokuda kwezita rake, nokuti kuteerera kwerutendo pakati zvose vahedheni,
1:6 kubva uyo nemiwo makadanirwa naJesu Kristu:
1:7 Vose vari kuRoma, anodiwa naMwari, akadana vasande. Nyasha kwamuri, uye rugare, kuna Mwari Baba vedu uye Ishe Jesu Kristu.
1:8 zvechokwadi, Ndinovonga Mwari wangu, kuburikidza naJesu Kristu, kutanga nokuda mose, nokuti kutenda kwenyu kuri kuziviswa munyika yose.
1:9 Nokuti Mwari ndiye chapupu changu, wandinoshumira pamweya wangu muevhangeri yeMwanakomana wake, kuti muchinyengetera ndakachengeta murangariro wenyu
1:10 nguva dzose muminyengetero yangu, kuteterera kuti neimwe nzira, pane imwe nguva, Ndive yakabudirira rwendo, mukati kwaMwari, kuti ndiuye kwamuri.
1:11 Nekuti ndinoshuva zvikuru kukuonai, I kuitira kuti tigovane nemwi imwe zvokunamata nyasha kuti akusimbisei,
1:12 zvakananga, kuti tinonyaradzwa pamwe nemi neicho yakawiriranwa: kutenda kwako uye nevangu.
1:13 Asi ndinoda kuti muzive, hama, kuti handina kazhinji aida kuuya kwamuri, (kunyange ndakadziviswa kusvikira nguva ino kunyange) saka ini vawane nezvibereko pakati penyu, sezvo pakati pavamwe vaHedheni.
1:14 Kuna nevaGiriki uncivilized, kune vakachenjera nokuna mapenzi, Ndiri chikwereti.
1:15 Saka mukati mangu pane zvikaita kuti kundoparidza kuti nemiwo vari kuRoma.
1:16 Nokuti handinyari pamusoro Gospel. Nokuti isimba raMwari rinoendesa kuruponeso kune vatendi vose, tanga muJudha, uye muchiGiriki.
1:17 Nokuti kururamisira kwaMwari kunoratidzwa mukati maro, nokutenda kusvikira kutenda, sezvakanga zvakanyorwa: "Nokuti upenyu chete nokutenda."
1:18 Nekuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kubva kudenga pamusoro ose hanya nezvisina kururama uye kusaruramisira pakati pevanhu vaya yokudzivisa nayo chokwadi chaMwari nokusaruramisira.
1:19 Nokuti chii chinozivikanwa pamusoro paMwari zviri pachena pakati pavo. Nokuti Mwari wakazviratidza kwavari.
1:20 Nokuti zvinhu zvisingaoneki pamusoro pake takaitwa pachena, kubva pakusikwa kwenyika, kuitwa kunzwisisa nezvinhu dzakaitwa; saizvozvo ake kunaka risingaperi pamwe neuMwari hwake, zvokuti havana pembedzo.
1:21 Nokuti kunyange zvazvo vaiziva Mwari, havana kukudza Mwari, kana kuvonga. pachinzvimbo, Ivo vakava simba mupfungwa dzavo, uye mwoyo yavo isina yakavharidzirwa.
1:22 For, apo vachizivisa Vachizvipupurira kuva vakachenjera, vakava mapenzi.
1:23 Uye vakashandurira kubwinya kwaMwari asingaori kuti kumufananidza nechifananidzo chemunhu unoparara, uye ndege zvinhu, uye mana makumbo marefu mhuka, uye nenyoka.
1:24 Nechikonzero ichi, Mwari akavaisa mumaoko zvido kwemwoyo yavo inonatsa, zvokuti anotambudzika miviri yavo pamwe zvaoma pachavo.
1:25 Uye vakashandurira chokwadi chaMwari kunhema. Vakanamata uye vakashumira zvisikwa, pane Musiki, iye unorumbidzwa nokusingaperi. Amen.
1:26 Nokuda kwaizvozvi, Mwari akavaisa mumaoko kunonyadzisa kunonyadzisa. Semuyenzaniso, vakadzi vavo vakashandura rechisikirwo muviri kushandisa riya rinopesana nechisikirwo.
1:27 saizvozvowo, varume uyewo, kusiya basa rechisikirwo kuti vakadzi, vakapisira muzvishuvo kwavo: vanhurume kuita nevanhurume chii zvinonyadzisa, uye vachigamuchira mukati mavo muripo kuti hazvo kunobva kukanganisa kwavo.
1:28 Uye sezvo havana kuratidza kuti Mwari ruzivo, Mwari akavaisa mumaoko imwe tsika yakaipa mafungiro, kuitira kuti vaite zvinhu zvisakafanira:
1:29 vakazadzwa chose zvakaipa zvose, utsinye, ufeve, pfuma, zvakaipa; Vakazara negodo, umhondi, kukakavara, kunyengera, Pasinei, makuhwa;
1:30 enhema, venga kuna Mwari, janyangura, zvitutumadza, kuzvipira kukwidziridza, devisers zvakaipa, vasingateereri vabereki,
1:31 mapenzi, zvisina; pasina rudo, pasina kuvimbika, pasina tsitsi.
1:32 uye izvi, kunyange vakaziva kururamisira kwaMwari, haana kunzwisisa kuti vanoita nenzira vakakodzerwa norufu, uye kwete chete vaya vanoita zvinhu izvi, asiwo vaya kubvuma zvinoitwa.
2:1 Nechikonzero ichi, O murume, mumwe nomumwe wenyu anotonga ari nemanzvengero. Nokuti icho chaunotonga mumwe, unozvipa mhosva iwe. Nokuti imi kudarowo zvinhu uchitonga.
2:2 Nokuti tinoziva kuti kutonga kwaMwari kuri maererano nechokwadi pamusoro pevanoita zvinhu zvakadaro.
2:3 asi, O murume, kana uchitonga avo vanoita zvinhu zvakadai iwe ita, Unofunga kuti ungatiza kutonga kwaMwari?
2:4 Kana unozvidza ufumi hwenyasha dzake nemoyo murefu nemoyo? Hamuzivi kuti mutsa waMwari unokudana pakutendeuka?
2:5 Asi maererano wako wose nesimba uye impenitent, iwe dzinochengeta unozviunganidzira hasha, kusvikira zuva rehasha uye Zvakazarurwa mukutongwa kwaMwari.
2:6 Nokuti Iye achaitira mumwe nomumwe maererano nemabasa ake:
2:7 Kune vaya, maererano nemabasa akanaka murwere, kurumbidzwa nokukudzwa nokusaora, zvechokwadi, iye uchapa husingaperi.
2:8 Asi kune vaya vanokakavara uye vasingabvumi kubvuma chokwadi, asi pachinzvimbo kuvimba zvakaipa, iye uchapa hasha uye akashatirwa.
2:9 Kutambudzika nenhamo zviri pamusoro pemweya umwe neumwe wemunhu anoita zvakaipa: tanga muJudha, uyewo Greek.
2:10 Asi kubwinya nokukudzwa uye norugare kuna vose vanoita zvakanaka: tanga muJudha, uyewo Greek.
2:11 Nokuti hapana kutsaura naMwari.
2:12 Nokuti aninani vakatadza vasina mutemo, vachaparara vasina murairo. Uye ani naani akanga vakatadza mumurairo, vachatongwa nemurairo.
2:13 Nokuti havasi vanzwi vemurairo vakarurama pamberi paMwari, asi ndiko vaiti vemurairo vachanzi vakarurama.
2:14 Nokuti kana vaHedheni, vasina murayiro, vachiita pachisikirwo zvinhu zviri pamurairo, vakadaro, vasina mutemo, ndivo murairo wavo vamene.
2:15 Nokuti anoratidza basa remurairo wakanyorwa mumoyo yavo, hana yavo inoshandura uchapupu pamusoro pavo, uye pfungwa dzavo mukati mavo zvakare mhosva kana kunyange munovadzitira,
2:16 kusvikira zuva apo Mwari raachazotonga zvakavanzika zvavanhu, kuburikidza naJesu Kristu, maererano Gospel yangu.
2:17 Asi kana iwe nezita muJudha, uye iwe zororo pamusoro pomurayiro, uye imi kuwana kubwinya muna Mwari,
2:18 uye imi makaziva zvaanoda, uye iwe anoratidza zvikuru zvinhu, wakati anyeverwa nemurairo:
2:19 iwe wava chivimbo mukati pachako kuti uri mutungamiriri mapofu, chiedza vaya vari murima,
2:20 murayiridzi kune mapenzi, mudzidzisi vana, nekuti une mhando zivo uye zvokwadi pamurairo.
2:21 Semagumo, iwe kudzidzisa vamwe, asi imi hauzvidzidzisi. Iwe unoparidza kuti vanhu havafaniri kuba, asi iwe pachako kuba.
2:22 Iwe taura pamusoro upombwe, asi iwe upombwe. You kusema zvifananidzo, asi iwe unoita zvinhu zvitsvene.
2:23 Waizodaro kubwinya mutemo, asi pachishandiswa kusavimbika mutemo iwe zvinozvidza Mwari.
2:24 (Nokuti imi zita raMwari riri kumhurwa pakati pavaHedheni, sezvakanga zvakanyorwa.)
2:25 zvechokwadi, kudzingiswa kunobatsira, kana iwe vachengete mutemo. Asi kana uri mutengesi mutemo, kudzingiswa kwako kwava kusadzingiswa.
2:26 uye saka, kana kusadzingiswa kuchichengeta veDare mutemo, ngaarege ichi kushayikwa kudzingiswa savakadzingiswa?
2:27 Uye kuti riri pachisikirwo kudzingiswa, kana achichengeta murairo, Hatiti kutonga here, uyo netsamba uye kudzingiswa mutengesi mutemo?
2:28 Nokuti muJudha haasi iye inoita kudaro kunze. Kana kudzingiswa inoita kudaro kunze, munyama.
2:29 Asi muJudha ndiye uri kudaro mukati. Uye kudzingiswa kwomwoyo iri mweya, kwete mutsamba. Nokuti kurumbidzwa kwayo haisi yevanhu, asi Mwari.
3:1 Naizvozvo, chiizve muJudha, kana chii inoshanda kudzingiswa?
3:2 Zvizhinji nemitoo yose: Kutanga kwazvose, zvechokwadi, nokuti achitsetsenura waMwari avakapiwa.
3:3 Asi chii kana vamwe vavo havana kutenda? Ko kusatenda kwavo chakunodzikisira kutenda Mwari? Ngahurege kuva zvakadaro!
3:4 Nokuti Mwari ndowechokwadi, asi munhu mumwe nomumwe unonyengera; sezvakanga zvakanyorwa: "Naizvozvo, muri mururamiswe pamashoko enyu, uye iwe zvichavapo paunopa mutongo. "
3:5 Asi kana kunyange kusaruramisira yedu kunoratidza ruramisiro yaMwari, tichatii? Kungava Mwari ichidzvinyirira yokupa kutsamwa?
3:6 (Ndiri kutaura sezvinoita vanhu.) Ngahurege kuva zvakadaro! zvimwe, sei Mwari aizoita kutonga nyika ino?
3:7 Nokuti kana chokwadi chaMwari yakawanzwa, kuburikidza falseness yangu, kukubwinya kwake, ko Ndichiri kutongwa somutadzi yakadaro?
3:8 Uye hatifaniri here kuita zvakaipa, kuti zvakanaka angaguma? Nokuti saka isu tave achicherwa, uye saka vamwe vanoti takati; dzavo Kutongwa inongova.
3:9 Chii chinotevera? Tinofanira kuedza shasha mberi kwavo? Kwete! Nokuti isu hatina mhosva vaJudha vose navaGiriki kuti pasi chivi,
3:10 sezvakanga zvakanyorwa: "Hakuna munhu akarurama.
3:11 Hakuna unonzwisisa. Hakuna anotsvaka Mwari.
3:12 All vakatsauka; pamwe chete vava maturo. Hakuna anoita zvakanaka; hapana kunyange chimwe.
3:13 Huro dzavo guva rakashama. Nendimi dzavo, vakatsanangurwa vakadadira. Uturu hwemhungu hwuri pasi pemiromo yavo.
3:14 Muromo wavo uzere nokutuka nekuvava.
3:15 tsoka dzavo dzinokurumidza kuteura ropa.
3:16 Kushungurudzika uye kusafara zviri munzira dzavo.
3:17 Uye nzira yerugare havana kuiziva.
3:18 Hakuna kutya Mwari pamberi pameso avo. "
3:19 Asi tinoziva kuti chero murayiro anotaura, rinotaura kune vari mutemo, kuti miromo yose inogona pamambakwedza uye yose nyika vangagara Mwari.
3:20 Nokuti pamberi pake hakuna nyama inganzi yakarurama nemabasa emurairo. Nokuti ruzivo wechivi kuburikidza nomurairo.
3:21 asi ikozvino, pasina murairo, kutonga kwaMwari, uko mutemo uye vaporofita vakapupura, rave pachena.
3:22 Uye kururamisira kwaMwari, kunyange nerutendo rwaJesu Kristu, ari vose uye vose avo vanotenda maari. Nokuti hapana musiyano.
3:23 Nokuti vose vakatadza uye vose vanoda kubwinya kwaMwari.
3:24 Takave takarurama pachena nenyasha dzake kubudikidza nerudzikunuro rwuri muna Kristu Jesu,
3:25 uyo Mwari akapa ave muyananisi, nokutenda muropa rake, kuzivisa kururamisira kwake, nekusarangarira aimbova mhosva,
3:26 uye nemoyo murefu kwaMwari, kuratidza kururamisira kwake panguva ino, zvekuti iye ave zvose Just One uye anoruramisira munhu werutendo rwaJesu Kristu.
3:27 Naizvozvo, apo hwenyu ozvikwidziridza? Kwabviswa. Nomutemo upi? Kuti mabasa? Aihwa, asi nomutemo wokutenda.
3:28 Nokuti isu achatonga munhu kuti tiruramiswe nokutenda, pasina mabasa emurairo.
3:29 Ndiye Mwari wevaJudha chete uye kwete nekuvahedheni? Mukupesana, ndowavaHedheniwo.
3:30 Nokuti ndiye Mwari unoruramisa kudzingiswa nokutenda uye nekusadzingiswa kubudikidza nerutendo.
3:31 Ko zvino isu kuparadza murairo nerutendo? Ngahurege kuva zvakadaro! pachinzvimbo, tiri kuita mutemo kumira.
4:1 Naizvozvo, tichatii kuti Abrahamu akanga kubudirira, unova baba vedu panyama?
4:2 Nekuti dai Abhurahamu akanzi wakarurama nemabasa, aizofanira kubwinya, asi kwete naMwari.
4:3 Ko Rugwaro kutaura? "Abrama akatenda Mwari, uye zvikanzi vairatidza kwaari kusvikira kururamisira. "
4:4 Asi uyo anoshanda, mubayiro hadzina muverengwe zvenyasha, asi maererano chikwereti.
4:5 Asi zvechokwadi, nokuti uyo asingadi kushanda, asi anotenda kuna iye unoruramisa pavatadzi, kutenda kwake vairatidza kuna kururamisira, maererano nechinangwa chenyasha dzaMwari.
4:6 Saizvozvowo, Dhavhidhi ndizvo kuropafadzwa munhu, uyo Mwari kunounza kururamisira pasina mabasa:
4:7 "Vakaropafadzwa vakakanganwirwa zvisakarurama zvavo zvaregererwa uye vane zvivi zvakafukidzwa.
4:8 Wakaropafadzwa munhu usinganzi naShe hazviverengerwi chivi. "
4:9 Anoita kuropafadzwa uku, ndokubva, kuramba chete ari vakadzingiswa, kana kuri kunyange vasina kudzingiswa? Nokuti tinoti rutendo vairatidza kuna Abhurahamu kusvikira kururamisira.
4:10 Asi zvino sei akanga vairatidza? In kudzingiswa kana mukusadzingiswa? Kwete mukudzingiswa, asi mukusadzingiswa.
4:11 Nekuti wakagamuchira chiratidzo chekudzingiswa sechiratidzo ruramisiro kuti kutenda ariko pasina kudzingiswa, kuti ave baba vevose avo vanotenda apo kudzingiswa, zvokuti zvingangogadzirwa vairatidza kwavari kusvikira kururamisira,
4:12 uye ave baba vokudzingiswa, kwete chete kune vaya kudzingiswa, asi kunyange vaya vanotevera tsoka kuti kutenda kuri nepakusadzingiswa baba vedu Abhurahama.
4:13 Nokuti Promise kuna Abhurahama, uye kuvazukuru vake, kuti nhaka nyika, haana kubudikidza nemurairo, asi kubudikidza nokururama kwokutenda.
4:14 Nokuti kana avo vari vemurairo ndivo vadyi venhaka, kutenda anova chinhu uye neChipikirwa iri chabvisa.
4:15 Nekuti murairo unouyisa kutsamwa kuna. Uye pasina mutemo, hapana mutemo-pakumedura.
4:16 Nokuda kwaizvozvi, zviri kubva pakutenda zvenyasha kuti Promise kunosimbiswa kuzvibereko zvose, kwete chete kune vaya murairo, asi naivo vari vokutenda kwaAbhurahama, Ndiye baba vedu pamberi paMwari,
4:17 mune waakatenda, uyo anomutsiridza vakafa uye anodana izvo havapo avepo. Nokuti zvakanyorwa: "Ini makasimbisa uve baba vemarudzi mazhinji."
4:18 Iye akatenda, aine tariro asisina tariro, kuti ave baba vemarudzi mazhinji, maererano zvakataurwa kwaari: "Saizvozvo venyu, achinge ava."
4:19 Uye haana simba parutendo, haana kufunga muviri wake kuti akafa (kunyange akanga ipapo anenge zana nemakore), kana chaSara kuti akafa.
4:20 Ndokuzo, muna Promise waMwari, haana kuzeza kubva kusavimba, asi pachinzvimbo akasimbiswa mukutenda, achipa rumbidzo kuna Mwari,
4:21 tichiziva zvizere kuti chero Mwari akavimbisa, anokwanisawo kuita.
4:22 Uye nokuda kwechikonzero ichi, zvakanzi vairatidza kwaari kusvikira kururamisira.
4:23 Zvino ichi zvichinzi, kuti zvakanzi vairatidza kwaari kusvikira kururamisira, kwete chete nokuda kwake,
4:24 asiwo nokuda kwedu. Nokuti ndiye uchapfekedzwa vairatidza kwatiri, kana tikatenda iye akamutsa Ishe wedu Jesu Kristu kubva kuvakafa,
4:25 uyo akapiwa nokuda kwokudarika kwedu, uye ndiani akamuka zvakare nokuda kwokururamiswa kwedu.
5:1 saka, zvatinonzi takarurama nerutendo, ngativei norugare naMwari, kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
5:2 Nokuti kubudikidza naye isu vanewo mapindire nokutenda kune ichi nyasha, umo isu takasimba, uye kuzvirumbidza, mutariro yekubwinya kwevanakomana vaMwari.
5:3 Uye kwete chete kuti, asi tinowanawo kubwinya padambudziko, tichiziva kuti kutambudzika paanoramba achishivirira,
5:4 uye mwoyo murefu kunotungamirira kuidzwa, asi achiratidza zvinoisa zvechokwadi tariro,
5:5 asi tariro haisi kusina pakwakavakirwa, nekuti rudo rwaMwari akadururwa mumwoyo yedu kubudikidza naMweya Mutsvene, uyo unopiwa kwatiri.
5:6 Asi nei Kristu, tichiri ndonda, panguva yakafanira, kutambura rufu nokuda pavatadzi?
5:7 Zvino mumwe anogona haawanzotauri kufira nokuda kururamisira, semuyenzaniso, zvichida mumwe munhu anogona kufira nokuda munhu akanaka.
5:8 Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, panguva yakafanira,
5:9 Kristu akatifira. saka, zvatinonzi takarurama nokuda kweropa rake, kunyanya tichaponeswa kubudikidza naye pahasha.
5:10 Nokuti kana takayananiswa naMwari nerufu rweMwanakomana wake, tichiri vavengi, kunyanya, tayananiswa, tichaponeswa neupenyu hwake.
5:11 Uye kwete chete kuti, asi tinozvikudzawo kubwinya muna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu, kuburikidza watakagamuchira ikozvino naye iko kuyananiswa.
5:12 saka, mumwe murume chivi sezvo kuburikidza apinda ino, uye kuburikidza nechivi, rufu; saizvozvowo rufu hwakatamisirwa kuvanhu vose, kune vose vakatadza.
5:13 Nokuti kunyange asati mutemo, chivi chakanga chava munyika, asi chivi akanga hazviverengerwi apo murayiro hariko.
5:14 Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, kunyange vaya vasina kutadza, akafanana nokudarika kwaAdhamu, uyo ari mufananidzo waiye wakange achizouya.
5:15 Asi chipo hachina zvachose sezvinoita mhosva. Nokuti kunyange nokuda kweumwe, vazhinji vakafa, asi zvikuru, nenyasha mumwe murume, Jesu Kristu, ane nyasha uye chipo chaMwari chawanzwa vazhinji.
5:16 Uye chivi kuburikidza hakuna zvachose sezvinoita chipo. For zvirokwazvo, kutonga mumwe kuna mhosva, asi nyasha kune mhosva zhinji iri chichienda.
5:17 nokuti kunyange, nokuda imwe mhosva, rufu rwakabata ushe kubudikidza nomunhu, asi zvakadaro zvikuru zvinofanira avo vanogamuchira zvakawanda nyasha, zvose chipo uye kururamisira, paupenyu kubudikidza neumwe, Jesu Kristu.
5:18 saka, sezvo kuburikidza kweumwe, Varume vose vakaurawa pasi mhosva, saizvozvo kubudikidza kururamisira mumwe, Varume vose achawira pasi zvikapa kuupenyu.
5:19 For, sezvakanga kubudikidza nokusateerera mumwe murume, vazhinji dzakatangwa sevatadzi, saizvozvo nekuteerera kwemumwe murume, vazhinji chichasimbiswa sezvo chete.
5:20 Zvino murairo wakapinda nenzira kuti zvigumbuso kuti dziwande. Asi apo mhosva vakanga zhinji, nyasha superabundant.
5:21 Naizvozvo, sezvo chivi sezvachakatonga murufu, saizvozvowo Nyasha ushe kubudikidza nokururama kusvikira kuupenyu hwusingaperi, kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu.
6:1 Saka tichatii? Tinofanira kuramba chivi, kuti nyasha dziwande?
6:2 Ngahurege kuva zvakadaro! Nokuti sei isu takafa kuzvivi vachiri kurarama chivi?
6:3 Hamuzivi here kuti avo vedu zvakabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake?
6:4 Nokuti kuburikidza nokubhabhatidzwa takapiwa makavigwa pamwe naye murufu, kuti, nenzira Kristu akamuka kubva kuvakafa, nokubwinya kwaBaba, saka dai isuwo tifambe hutsva.
6:5 Nokuti kana tava kudyarwa pamwe, akafanana norufu rwake, saizvozvo isuwo kuva, akafanana pakumuka kwake.
6:6 Nokuti tinoziva ichi: kuti kwedu vaimbova teverezvo vave pamuchinjikwa pamwe naye, kuti muviri kuri chivi anogona vaparadzwe, uyezve, kuti tirege kuvazve kushumira chivi.
6:7 Nokuti uyo anenge afa wasunungurwa pachivi.
6:8 Zvino kana takafa pamwe naKristu, tinotenda kuti tichararamawo pamwe chete naKristu.
6:9 Nokuti tinoziva kuti Kristu, pakumuka kuvakafa, haachagoni kufa: rufu asisina nesimba pamusoro pake.
6:10 Nokuti sezvo zvikuru sezvo akafira zvivi, akafa kamwe. Asi sezvo zvikuru mupenyu, anorarama Mwari.
6:11 uye saka, unofanira kufunga zvionei zvirokwazvo vakafa chivi, uye kuti kurarama Mwari muna Kristu Jesu Ishe wedu.
6:12 saka, Musarega chivi ushe mumuviri wenyu unofa, zvokuti iwe vaizoteerera kuchiva kwayo.
6:13 Uyewo unofanira kupa nhengo dzomuviri wako nhumbi zvakaipa zvivi. pachinzvimbo, kupa imi Mwari, sokunge kuti uri mupenyu pashure porufu, uye kupa nhengo dzomuviri wako ive midziyo nokururamisira Mwari.
6:14 Nokuti chivi haafaniri kuva nesimba pamusoro pako. Nokuti hamusi pasi pemurairo, asi pasi penyasha.
6:15 Chii chinotevera? Tinofanira chivi nekuti hatisi pasi pemurairo, asi pasi penyasha? Ngahurege kuva zvakadaro!
6:16 Hamuzivi here wauri kupa muve varanda kuteerera pasi? Muri varanda wamunokangamwira kuteerera: kana chivi, kusvikira rufu, kana vokuteerera, kusvikira kururamisira.
6:17 Asi Mwari ngaavongwe kuti, kunyange waizvisunga kuva varanda vechivi, zvino iwe wanga kuteerera kubva pamoyo chaizvo chimiro nedzidziso umo wanga wakagamuchira.
6:18 Uye masunungurwa kubva pachivi, tava varanda kururamisira.
6:19 Ndiri kutaura sokutaura nekuda kweutera hwenyama yenyu. Nokuti sezvo imi akapa nhengo dzomuviri wako kushumira kumwedzi uye zvakaipa, nokuda kwezvakaipa, saizvozvowo imwi ikozvino akabudisa nhengo dzomuviri wako kushumira kururamisira, nokuda chokucheneswa.
6:20 Nokuti kunyange maimbova varanda vechivi, mava vana kururamisira.
6:21 Asi chii muchero sei muchichengeta panguva iyoyo, pazvinhu pamusoro zvamava kunyara? Nokuti mugumo wezvinhu izvozvo rufu.
6:22 Asi zvechokwadi, masunungurwa ikozvino pachivi, uye zvaakaitwa varanda vaMwari, muchichengeta muchero wako kuutsvene, uye zvechokwadi kuguma kwayo husingaperi.
6:23 Nokuti mubayiro wechivi ndirwo rufu. Asi chipo chaMwari chokungopiwa ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu.
7:1 Ko hamuzivi, hama, (zvino ndiri kutaura kuvanhu vanoziva murayiro) kuti murayiro une simba pamusoro pomunhu chete saka achingorarama?
7:2 Semuyenzaniso, mumwe mukadzi ari pasi murume anosungirwa nomurayiro apo murume wake upenyu. Asi kana murume wake afa, anosunungurwa kubva pamurairo womurume.
7:3 saka, murume wake achiri mupenyu, kana iye anga nemumwe murume, iye anofanira anonzi chifeve. Asi kana murume wake afa, iye anosunungurwa kubva pamurairo womurume, zvokuti, kana iye anga nemumwe murume, iye asiri mhombwekadzi.
7:4 uye saka, hama dzangu, nemiwo vava vakafa kumurairo, kuburikidza nomuviri waKristu, kuti muve mumwe nomumwe wakamutswa kubva kuvakafa, kuitira kuti tinogona kubereka zvibereko Mwari.
7:5 Nokuti pataiva munyama, kuchiva kwezvivi, yaiva pasi pemurairo, kushanda mukati miviri yedu, kuti kubereka zvibereko zvinoisa kurufu.
7:6 Asi ikozvino takasunungurwa kubva pamurayiro rufu, iyo takanga kuitwa, saka zvino tinogona kushumira nomudzimu kumutsidzira, uye kwete yekare nenzira, netsamba.
7:7 Chii chatinofanira kutaura inotevera? Ko murairo chivi? Ngahurege kuva zvakadaro! Asi handizivi chivi, kunze kwekubudikidza nemurairo. Semuyenzaniso, Ndingadai ndisina kuziva pamusoro muchichochora, kana murairo akati: "Usachiva."
7:8 asi chivi, kugamuchira mukana kubudikidza nomurayiro, chikaita mandiri mitoo yose muchichochora. Nokuti kunze kwomurayiro, chivi chakafa.
7:9 Zvino ini akararama kwenguva yakati kunze kwomurayiro. Asi kana murayiro yakanga yasvika, chivi chakanga chakamuka,
7:10 uye ini ndikafa. Uye murairo, waiva muupenyu, akanga pacharo wakawanikwa neni wava werufu kwandiri.
7:11 ayo, kugamuchira mukana kubudikidza nomurayiro, ini chakandinyengedza, uye, kubudikidza nomurayiro, chivi chikandiuraya.
7:12 uye saka, mutemo pachawo zvechokwadi mutsvene, uye murayiro wacho mutsvene, wakarurama uye wakanaka.
7:13 Ipapo chii chakanaka yakaitwa murufu kwandiri? Ngahurege kuva zvakadaro! Asi chivi, kuitira kuti kuzikamwe chivi sokunge zvakanaka, akasonerapo rufu mandiri; kuti chivi, kubudikidza nomurayiro, zvive zvakaipa kwazvo.
7:14 Nokuti tinoziva kuti murairo ndewemweya. Asi ini ndiri wenyama, wakati atengeswa pasi pechivi.
7:15 Nokuti zvandinoita zvinhu handina kunzwisisa. Nokuti handina kuita zvakanaka zvandinoda kuita. Asi zvakaipa chandinovenga ndizvo zvandinoita.
7:16 saka, kana ndinoita chii handidi kuita, Ndiri chibvumirano mutemo, kuti murayiro wakanaka.
7:17 Asi ini ndiri toita kwete maererano nomutemo, asi maererano chivi izvo anogara mukati mangu.
7:18 Nokuti ndinoziva kuti zvakanaka haagari mukati mangu, ndiko, mukati nyama yangu. Nokuti kuda kuita zvakanaka nhema pedyo neni, asi kuita kuti zvakanaka, Handigoni kuzadzisa.
7:19 Nokuti handina kuita zvakanaka zvandinoda kuita. asi pachinzvimbo, I kuita zvakaipa kuti handidi kuita.
7:20 Zvino kana ini kuita handina kuda kuita, handisiri ini ndiri kuzviita, asi chivi izvo anogara mukati mangu.
7:21 uye saka, I vanoziva mutemo, nokutaura kuda kuita zvakanaka mukati pachangu, kunyange zvakaipa nhema pedyo neni.
7:22 Nokuti ndinofarira murairo waMwari, maererano nomunhu womukati.
7:23 Asi ndinoona umwe murairo mukati muviri wangu, vachirwa nomutemo wepfungwa dzangu, uye dzevakawanda neni mutemo wechivi uri munhengo dzangu.
7:24 Vasingafari murume kuti ndiri, ndiani kundisunungura kubva mumuviri uno worufu?
7:25 Nyasha dzaMwari, naJesu Kristu Ishe wedu! saka, Ndinoshumira murairo waMwari pamwe yangu pfungwa; asi nenyama, mutemo wechivi.
8:1 saka, hapana ikozvino hakuna kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, vasiri kufamba maererano nenyama.
8:2 Nokuti murairo weMweya weupenyu muna Kristu Jesu ini vasunungurwe pamurairo wechivi nerufu.
8:3 Nokuti kunyange ichi hazvaigoneka pasi pemurairo, nokuti simba panyama, Mwari akatuma Mwanakomana wake nemufananidzo wenyama yezvivi, uye nekuda kwechivi, kuti mhosva chivi munyama,
8:4 kuti kururamiswa nomurayiro kuzadziswe matiri. Nokuti isu hatisi kufamba maererano nenyama, asi maererano nomudzimu.
8:5 Nokuti vaya vari chibvumirano nenyama Vanoziva zvinhu zvenyama. Asi vaya vanoita chibvumirano nomudzimu Vanoziva zvinhu zvomudzimu.
8:6 Nokuti uchenjeri kwenyama ndirwo rufu. Asi uchenjeri mudzimu upenyu uye rugare.
8:7 Uye uchenjeri kwenyama inimical kuna Mwari. Nokuti hakuzviisi pasi pomurairo waMwari, uyewo unogona kuva.
8:8 Naizvozvo vaya vanoita munyama havagoni kufadza Mwari.
8:9 Uye imi hamuzi munyama, asi mumweya, kana chiri chokwadi kuti Mweya waMwari anogara mukati mako. Asi kana munhu asina Mweya waKristu, haana zvake.
8:10 Asi kana Kristu ari mukati menyu, zvino muviri zvechokwadi akafa, nezvechivi, asi mweya zvechokwadi anogara, nokuda kwokururamisa.
8:11 Asi kana Mweya waiye wakamutsa Jesu kubva kuvakafa upenyu mukati iwe, ipapo iye akamutsa Jesu Kristu kuvakafa uchamutsawo enliven yenyu inofa, achishandisa noMweya wake mupenyu mukati menyu.
8:12 saka, hama, hatina chikwereti nyama, kuti tirarame maererano nenyama.
8:13 Nokuti kana muchirarama maererano nenyama, uchafa. asi kana, neMweya, iwe mortify mabasa enyama, uchararama.
8:14 Nokuti vose vanotungamirirwa neMweya waMwari, ndivo vana vaMwari.
8:15 Uye hamuna kugamuchira, zvakare, mweya kwouranda nokutya, asi makagamuchira Mweya wokuitwa vana vanakomana, watinovimba mhere: "Abba, Baba!"
8:16 Nokuti Mweya amene inoshandura uchapupu mweya yedu kuti isu tiri vana vaMwari.
8:17 Asi kana tiri vana, ipapo tiri vagari: Zvechokwadi venhaka vaMwari, asiwo co-venhaka pamwe naKristu, asi nenzira yakadaro kuti, kana tichitambudzika pamwe chete naye, isu zvichataurwawo arumbidzwe naye.
8:18 Nokuti ndinoona kuti matambudziko enguva ino haana kufanira kuenzaniswa kuti kubwinya neramangwana kuchazoratidzwa kwatiri.
8:19 Nokuti tarisiro chisikwa anticipates chizaruro kwevanakomana vaMwari.
8:20 Nokuti chisikwa chakaiswa pasi maturo, kwete nokuzvidira, asi nokuda kwaiye akaita pasi, kusvikira tariro.
8:21 Nokuti chisikwa pachachowo zvichataurwawo paruoko uranda hwokuora, kupinda rusununguko kubwinya kwevanakomana vaMwari.
8:22 Nokuti tinoziva kuti chisikwa chose chinogomera nechomukati, sokunge kusununguka, kunyange kusvikira ikozvino;
8:23 uye kwete izvi chete, asi tomene, sezvo tinoti chekutanga cheMweya. Nokuti isuwo tinogomera mukati medu, kutotarisira kwedu kuitwa sezvo vanakomana vaMwari, uye rudzikunuro rwemuviri wedu.
8:24 Nokuti takaponeswa netariro. Asi tariro iyo inoonekwa haisi tariro. Nokuti kana munhu anoona chimwe chinhu, kuti nei tariro?
8:25 Asi sezvo isu tariro zvatisina kuona, takamirira nekutsungirira.
8:26 saizvozvowo, Mweya anotibatsira mukusava nesimba kwedu. Nokuti hatizivi sei kuti kunyengeterera sezvatinofanira, asi Mweya amene anokumbira nokuda kwedu pamwe risingatauriki nokugomera.
8:27 Uye iye anoongorora mwoyo anoziva Mweya anotsvaka, nokuti anokumbira achimiririra navatsvene zvichienderana Mwari.
8:28 Uye tinoziva kuti, vaya vanoda Mwari, zvose zvinhu kushanda pamwe zvakanaka, vaya, maererano nechinangwa chake, vakadanwa kuti vave vatsvene.
8:29 Nokuti avo vaakagara aziva, naiyewo yakatemerwa, zvinoenderana nemufananidzo weMwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji.
8:30 Avo vakatemerwa, vaakadanawo. Uye vaya vaakadana, vaakaruramisawo. Avo vaakaruramisa, vaakakudzawo.
8:31 saka, chii chatinofanira kutaura pamusoro pezvinhu izvi? Kana Mwari ari kwatiri, uyo unopesana nesu?
8:32 Iye usina kutongoomera kunyange Mwanakomana wake pachake, asi akamuisa nokuda kwedu tose, sei kugona here, naye, makatipa zvose?
8:33 Ndiani achaita kuti kupomerwa vasanangurwa vaMwari? Mwari ndiye unoruramisa;
8:34 ndiani uyo anoshora? Kristu Jesu uyo ​​akafa, uye uyo zvechokwadi wamuka, ari kuruoko rworudyi rwaMwari, uye kunyange iye zvino anotinyengeterera.
8:35 Ipapo iye kutiparadzanisa norudo rwaKristu? kutambudzika? kana kurwadziwa? kana nzara? kana kushama? kana njodzi? kana kutambudzwa? Kana munondo?
8:36 Nokuti sezvo zvakanyorwa: "Nokuda kwenyu, Tiri kuurayiwa zuva rose. Tiri kubatwa samakwai anondobayiwa. "
8:37 Asi zvose izvi tiri kukunda, nokuda kwaiye akatida.
8:38 Nokuti ndine chokwadi kuti harwusi rufu, kana upenyu, kana Angels, kana Principalities, kana Masimba, kana zviripo, kana ramangwana zvinhu, kana simba,
8:39 kana miti, kana pakadzika, kana zvimwe akasika chinhu chipi, achava kutiparadzanisa norudo rwaMwari, rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu.
9:1 Ndiri kutaura chokwadi muna Kristu; Handisi kureva nhema. anopa hana yangu uchapupu kwandiri Mutsvene,
9:2 nokuti kusuruvara mukati mangu iguru, uye pane kuramba shungu mumwoyo mangu.
9:3 Nokuti ndakanga vachikumbira kuti ini pachangu arovererwe anathemized Kristu, nokuda kwehama dzangu, vari ivo verudzi rwangu panyama.
9:4 Ava ndivo vaIsraeri, uyo runobva sevanakomana, uye nokukudzwa testamende, uye nokupa uye kutevera mutemo, uye zvipikirwa.
9:5 Ndohwavo ndiwo madzibaba, uye kubva kwavari, panyama, ndiye Kristu, ari pamusoro zvose, raMwari akaropafadzwa, nokusingaperi. Amen.
9:6 Asi hazvisi kuti Shoko raMwari chakaparara. Nokuti havasi vose vaya vari vaIsraeri vari vaIsraeri.
9:7 Uye kwete vanakomana vose vaAbrahamu: "Nokuti vana vako vachaparadzwa naro Isaka."
9:8 Nemamwe mashoko, avo vari vanakomana vaMwari havasi vaya vana panyama, asi avo vari vanakomana Promise; idzi kuti vana.
9:9 Nokuti shoko rechipikirwa iri: "Ndichadzokazve panguva yakafanira. Uye ipapo achava mwanakomana Sara. "
9:10 Uye akanga asiri oga. For Ribhekawo, wakati nemimba Isaka baba vedu, kubva chiito,
9:11 apo akanga asati aberekwa vana, uye akanga asati aita chinhu chakanaka kana chakaipa (zvokuti chinangwa chaMwari kuti kuvakirwa sarudzo dzavo),
9:12 uye kwete nokuda kwemabasa, asi nekuda daidzo, zvakanzi kwaari: "Mukuru achava muranda womuduku."
9:13 Saizvozvowo zvakanyorwa: "Ndakakudai Jakobho, asi Esau ndakamuvenga. "
9:14 Chii chatinofanira kutaura inotevera? Pane pakudyidzana naMwari? Ngahurege kuva zvakadaro!
9:15 Nokuti iye anoti kuna Mosesi: "Ndichadaro tsitsi chero wandinenge ndanzwira tsitsi. Uye ndichaita kupa tsitsi chero wandinenge ndanzwira tsitsi. "
9:16 saka, haina kwakavakirwa vaya vanosarudza, kana avo unovakunda, asi pana Mwari inobvisa tsitsi.
9:17 Nokuti Rugwaro runoti kuna Farao: "Ndakamumutsa imi nokuda chinangwa ichi, I kuitira kuti aratidze simba rangu kwamuri, uye kuti zita rangu inogona zvakaziviswa yose. "
9:18 saka, anotora tsitsi waanoda achida, uye anoomesa mwoyo wouyo waanoda achida.
9:19 uye saka, ungati kwandiri: "Zvino sei Iye uchawanirei mhosva? Nokuti ndiani anogona kudzivisa kuda kwake?"
9:20 O murume, vari kuti kubvunza Mwari? chinhu yave akaumba seiko kuna iye akaumba naye: "Seiko akandiita iyi nzira?"
9:21 Uye Ko muumbi haana simba pamusoro pevhu here kuti, kubva chete zvinhu, chaizvo, mudziyo mumwe unokudzwa, asi zvechokwadi neumwe kunyadziswa?
9:22 Zvakadini kana Mwari, achida kuzivisa hasha dzake uye kuita kuti simba rake rizivikanwe, atsungirira, nemoyo murefu, midziyo vakakodzera hasha, zvakakodzera kuti aparadzwe,
9:23 kuti kuzivisa upfumi kubwinya kwake, mukati izvi yengoni, izvo waakagadzirira kubwinya?
9:24 Uye saka zviri neavo vedu waasina anonziwo, kwete chete kubva pakati pevaJudha, asi kunyange pakati pavahedheni,
9:25 sezvaakanga rinoti Hosea: "Ndichamushevedzera avo vakanga vasiri vanhu vangu, 'Vanhu vangu,'Uye iye akanga asiri mudikanwi wangu, 'mudiwa,'Uye iye akanga asina kunzwirwa nyasha, 'Munhu anenge akawana tsitsi.'
9:26 Uye ichi chichava: panzvimbo pakanzi kwavari, 'Hamusi vanhu vangu,'Ipapo vachanzi vana vaMwari mupenyu. "
9:27 Uye Isaya akadanidzira akamiririra Israel: "Kana nhamba kwevanakomana vaIsraeri kwakaita sejecha regungwa, vakasara vachaponeswa.
9:28 Nokuti anofanira kupedzisa shoko rake, apo abbreviating kubva zvakarurama. Nokuti Ishe mugoita pfupi shoko pamusoro penyika. "
9:29 Uye sezvakanga zvafanotaurwa Isaiah: "Dai asiri Jehovha Wamasimba Ose akanga ikazopiwa mwana, tingadai takaita seSodhomu, uye tingadai takaitwa akafanana neGomora. "
9:30 Chii chatinofanira kutaura inotevera? Kuti vahedheni vasingatsvaki kururamisira chabudirira kururamisira, kunyange kururamisira ari kutenda.
9:31 Asi zvechokwadi, Izirayeri, kunyange kutevera mutemo kururamisira, asina asvika pamurairo kururamisira.
9:32 Nei izvi? Nekuti havana kutsvaka kubva pakutenda, asi sokunge pamabasa. Nokuti vakagumburwa pamusoro chigumbuso,
9:33 sezvakanga zvakanyorwa: "Tarirai, Ndiri kuisa chigumbuso muZiyoni, nedombo chinyadzo. Asi ani nani unotenda kwaari haanganyadziswi kunyadziswa. "
10:1 Brothers, Zvechokwadi kuda kwomwoyo wangu, uye munyengetero wangu kuna Mwari, zviri kwavari kusvikira ruponeso.
10:2 Nokuti ini kupa uchapupu kwavari, kuti vanoshingairira Mwari, asi kwete maererano neruzivo.
10:3 For, vasingazivi kururama kwaMwari, uye vakatsvaka kumisa kururamisira hwavo, havana pasi pachavo kuti kururamisira kwaMwari.
10:4 Nokuti mugumo wemurairo, Kristu, kuna anoruramisira vose vanotenda.
10:5 Mozisi akanyora, pamusoro kururamisira kuti kuri kwemurairo, kuti murume kunge ndiani aita kururamisira achararama kururamisira.
10:6 Asi kururama kunobva pakutenda kunoreva kudai: Usati mumoyo mako: "Ndiani uchakwira kudenga?" (ndiko, kuunza Kristu pasi);
10:7 "Kana ndianiko uchaburukira kwakadzikadzika?" (ndiko, kuzodzoka Kristu kubva kuvakafa).
10:8 Asi chii anoita Rugwaro kutaura? "Shoko riri pedo, mumuromo mako uye nomumwoyo mako. "Iri ndiro shoko rokutenda, ratiri kuparidza.
10:9 Nokuti kana ukapupura nomuromo wako Ishe Jesu, uye kana uchitenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, iwe vachaponeswa.
10:10 Nokuti mwoyo, tinotenda kune kururamisira; asi muromo, Kureurura ndiko kuruponeso.
10:11 For Rugwaro runoti: "Vose avo vanotenda maari ngavhiringwe."
10:12 Nokuti hapana musiyano pakati pomuJudha nomuGiriki. Nokuti Ishe ndiye pamusoro zvose, zvikuru vose vanodana kwaari.
10:13 Nokuti vaya vose ndakadana zita raIshe uchaponeswa.
10:14 Ipapo chii munzira Avo vasina kutenda maari danai kwaari? Kana pakudini Avo vasina kumbonzwa nezvake kutenda maari? Uye chii munzira vachanzwa naye pasina kuparidza?
10:15 uye zvechokwadi, chii munzira havazovi kuparidza, kana vasina kutumwa, sezvarakanga zvichinzi: "Dzakanaka sei tsoka dzeavo kundoparidza rugare, vaya kundoparidza zvakanaka!"
10:16 Asi kwete vose vanoteerera Vhangeri. Nokuti Isaya anoti: "Ishe, ndiani wakatenda mharidzo yedu?"
10:17 saka, kutenda kunobva kunzwa, uye kunzwa uri kuburikidza neShoko Kristu.
10:18 Asi ndinoti: Havana kunzwa? For zvirokwazvo: "Inzwi ravo rabuda panyika yose, uye mashoko avo kusvikira miganhu yose. "
10:19 Asi ndinoti: Akaita vaIsraeri havana kuziva? Chekutanga, Moses anoti: "Ini uchakutungamirira kupinda vanokwikwidzana nevaya vasiri rudzi; mukati benzi rudzi, Ndichakuendesai mu hasha. "
10:20 Uye Isaya anoshinga kutaura: "Ini ndakanga yakawanikwa nevaya vakanga vasiri kunditsvaka. Ndakazviratidza pachena kune avo vasina kubvunza ini. "
10:21 Zvino kuna Israeri anoti: "Zuva rose ndakatambanudzira maoko angu kuvanhu vasingatendi uye anopikisa ini."
11:1 saka, ndinoti: Mwari inopeperetswa vanhu vake? Ngahurege kuva zvakadaro! For I, wo, ndiri muIsraeri wevana Abraham, kubva kurudzi rwaBhenjamini.
11:2 Mwari haana inopeperetswa vanhu vake, vaakagara aziva. Uye hamuzivi here kuti rugwaro runotaura Elijah, sei anodana Mwari pamusoro paIsraeri?
11:3 "Ishe, vakauraya vaporofita venyu. Ivo vanyonganisa aritari dzenyu. Uye ini ndoga kuramba, uye vari kutsvaka upenyu hwangu. "
11:4 Asi chii Divine mhinduro kwaari? "Handina zvabatwa pachangu zviuru zvinomwe nevarume, vasina akapfugama zvavo pamberi Bhaari. "
11:5 saka, saizvozvo, zvakare munguva ino, pane vakasara yachengetwa maererano nesananguro yenyasha.
11:6 Uye kana zviri zvenyasha, zvino hazvisi ikozvino nemabasa; kana zvisakadaro, nyasha hadzisisiri vakasununguka.
11:7 Chii chinotevera? Chii Israel aitsvaka, haana kuwana. Asi vasanangurwa vakawana izvozvo. uye zvechokwadi, vamwe ava vakapofumadzwa,
11:8 sezvakanga zvakanyorwa: "Mwari akavapa mweya unhinhi: meso kuti musaonesesa, uye nzeve kuti varege kunzwa, kunyange kusvikira zuva rino. "
11:9 And David anoti: "Tafura yavo ngaive musungo akafanana, uye unyengeri, uye wokupomera, uye vatsiviwe kwavari.
11:10 Meso avo chakavanzwa, kuti varege kuona, uye kuti varege mukotamise misana yavo nokusingaperi. "
11:11 saka, ndinoti: Vati vakagumburwa nenzira kuti vawe? Ngahurege kuva zvakadaro! pachinzvimbo, ne mhosva dzavo, ruponeso nevahedheni, kuitira kuti ave muvengi wavo.
11:12 Zvino kana mhosva kwavo kuri fuma yenyika, uye kana diminution kwavo kuri fuma yevahedheni, zvikuru sei kuzara kwavo?
11:13 Nokuti ndinoti kwamuri vahedheni: zvechokwadi, chero ndiri mupostori kuvaHedheni, Ini achakudza ushumiri hwangu,
11:14 saizvozvo kuti vomutsa tsere venyama yangu, uye kuti ini ndiponese vamwe vavo.
11:15 Nokuti kana kurasikirwa kwavo nokuda kuyananiswa kwenyika, chii chaigona vadzoka zvive, kunze upenyu kubva kurufu?
11:16 Nokuti kana chibereko chekutanga yave vatsvene, saizvozvowo ane yose. Uye kana mudzi uri mutsvene, saizvozvowo matavi.
11:17 Uye kana mamwe matavi akavhuniwa, uye kana iwe, nokuva pamuorivhi bazi, vari vanobatanidzwa pane kwavari, uye iwe wava nomugove pamudzi nekukora wemuorivhi,
11:18 regai kuzvikudza pachako pamusoro pamatavi. Nokuti kunyange iwe kubwinya, murege mudzi, asi mudzi unokutakura iwe.
11:19 saka, ungati: Matavi akavhuniwa, kuti ini ndibatanidzwe pamusoro.
11:20 Well zvakakwana. Akavhuniwa nokuda kwokusatenda. Asi iwe mira kutenda. Saka regai kusarudza kuti ufungisise rinokudziwa, asi pachinzvimbo kutya.
11:21 Nokuti kana Mwari asina akaponesa matavi echisikigo, zvichida arege kukutavirirai.
11:22 Naizvozvo, cherechedzai unyoro uye nekuomarara kwaMwari. zvechokwadi, vaya vakawa, pane zvakaoma; asi kwamuri, pane kunaka kwaMwari, kana ukaramba mukunaka. zvimwe, newewo uchatemwa.
11:23 Uyezve, kana vasingagari kuramba mukusatenda, ivo vachabatanidzwa pamusoro. Nokuti Mwari ndiye anogona kuvabatanidza pamusoro zvakare.
11:24 Saka kana iwe wanga kubviswa emuorivi, izvo zvakasikwa kwamuri, uye, pamuorivhi, uri vanobatanidzwa pane zvakanaka wemuorivi, Ndoda vaya vari matavi echisikigo vachabatanidzwa kune avo wemuorivhi?
11:25 Nokuti handidi kuti musaziva, hama, chakavanzika ichi (urege sokuti akachenjera chete pachenyu) kuti mumwe upofu kwakaitika muIsraeri, kusvikira kuzara vaHedheni yasvika.
11:26 Uye nenzira iyi, zvose vaIsraeri vaponeswe, sezvakanga zvakanyorwa: "Kubva Zion anofanira svika iye anorwira, uye anofanira kutendeuka hanya nezvisina kururama kubva Jacob.
11:27 Uye ichi chichava sungano yangu navo, pandichabvisa zvivi zvavo. "
11:28 zvechokwadi, maererano Gospel, ivo vavengi nokuda kwenyu. Asi maererano nesananguro, ivo hunonyanya vadikamwa nekuda kwemadzibaba.
11:29 Nekuti zvipo kudaidzwa zvaMwari pasina kuzvidemba.
11:30 Uye sezvo nemiwo, kare, havana kutenda muna Mwari, asi zvino iwe manzwirwa tsitsi nekusatenda kwavo,
11:31 saizvozvo kunge izvi ikozvino havana kutenda, nokuti tsitsi dzenyu, saka kuti vawane tsitsi.
11:32 Nokuti Mwari akanyudzwa vose mukusatenda, kuti ngoni vose.
11:33 Oh, pakadzika kupfuma uchenjeri nezivo yaMwari! How isinganzwisisiki Kutonga kwake, uye hakunganzverwi nzira dzake!
11:34 Nekuti ndiani wakaziva fungwa yaIshe? Kana ndiani wakange ari murairidzi wake?
11:35 Kana ndiani kutanga akamupa, saka kuti kunenge kuti chikwereti?
11:36 For kwaari, uye kubudikidza naye, uye maari zvinhu zvose. Kwaari ndiko kukudzwa, nokusingaperi. Amen.
12:1 uye saka, Ndinokukumbirai, hama, kubudikidza netsitsi dzaMwari, kuti iwe upe miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene uye chinofadza Mwari, pamwe subservience pfungwa dzako.
12:2 Uye regai kusarudza kuti vafanane zera iri, asi pachinzvimbo sarudza kuti kudzorwa ari hutsva pfungwa dzako, kuitira kuti aratidze kuti zvinhu zvinodiwa naMwari: zvakanaka, uye chii zvinofadza, uye chii akakwana.
12:3 For ndinoti, nenyasha rakapiwa kwandiri, vose vari pakati penyu: Ngazvirege kutongoravira hapana kupfuura zvaanofanira kuravira, asi ngazvirege kutongoravira kuna nekuzvidzora uye sezvinoita Mwari akaparadzira mugove kwokutenda mumwe nomumwe.
12:4 Nokuti sezvo, mukati muviri mumwe, tine migove zhinji, kunyange zvose kumativi vasina chete basa,
12:5 saizvozvowo isu, vazhinji, tiri muviri umwe muna Kristu, uye mumwe nomumwe ari mutezo, mumwe nomumwe.
12:6 Uye isu, mumwe nomumwe tine zvipo zvakasiyana, maererano nenyasha rakapiwa kwatiri: kana uprofita, kubvumirana nemashoko kunzwisisa kutenda;
12:7 kana ushumiri, pakushumira; kana iye anodzidzisa, padzidziso;
12:8 unokurudzira, ngaakurudzire; iye anopa, muumwe; iye anodzora, pamusoro chikumbiro; iye anoratidza tsitsi, mu nomufaro.
12:9 Rudo ngaruve falseness: kuvenga zvakaipa, vakabatirira zvakanaka,
12:10 rudo vane pamapatya rudo mumwe, mukuru mumwe nomumwe rukudzo:
12:11 pamusoro chikumbiro, kwete simbe; mumweya, mupise; ndichibatira Ishe;
12:12 mutariro, vachifara; pakutambudzika, vachingoramba; mumunyengetero, nokusingaperi-chido;
12:13 mune matambudziko yavatsvene, kugoverana; mune mutsa, changamuka.
12:14 Ropafadzai vaya vanokutambudzai: komborera, uye musatuka.
12:15 Farai vaya vanofarira. Chemai vaya vachichema.
12:16 Garai zvakanaka mumwe nomumwe: kwete savoring chii rinokudziwa, asi achitenderana mukuzvininipisa. Musatora sokuti kuchenjera pachako.
12:17 Musatsiva munhu chakaipa zvakaipa. Goverai zvinhu zvakanaka, kwete chete pamberi paMwari, asiwo pamberi pevanhu vose.
12:18 Kana zvichibvira, kuitira kure sezvo uchigona, kuva norugare nevanhu vose.
12:19 Regai vadzivirire pachenyu, Mudikanwi ndivo. pachinzvimbo, kumbomira pahasha. Nokuti zvakanyorwa: "Kutsiva ndokwangu. Ndichapa chitarafu, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. "
12:20 Saka kana muvengi ane nzara, zvokudya naye; kana aine nyota, mupe chokunwa. Mukuita kudaro, uchatutira mazimbe anopisa pamusoro wake.
12:21 Musarega zvakaipa zvipararire, pachinzvimbo kuikunda zvakaipa achishandisa kunaka.
13:1 Mweya umwe neumwe ngauzviise pasi pemasimba epamusoro. Nokuti hakuna simba kunze kwerakabva kuna Mwari uye vaya akaiswapo naMwari.
13:2 uye saka, ani naani anoramba simba, Anokunda chii chave akaiswapo naMwari. Uye vaya vanodzivisa vari kuwana kutongwa voga.
13:3 Nokuti vatungamiriri havasi tsime kutya kune vaya vanoshanda zvakanaka, asi kune vaya vanoshanda zvakaipa. Uye waizosarudzei kuti kutya simba? Ipapo ita zvakanaka, uye imi munofanira kuva rumbidzo kwavari.
13:4 Nokuti iye ndiye muranda waMwari kuti kwamuri zvakanaka. Asi kana ukaita zvinhu zvakaipa, kutya. Nokuti haana pasina chikonzero kuti kutakura bakatwa. Nokuti iye ndiye muranda waMwari; mutsivi wehasha wakatsaurwa anoita zvakaipa.
13:5 Nechikonzero ichi, zvakafanira kuti pasi, kwete nokungoti hasha, asi nekuda kwehanawo.
13:6 saka, munofanira kupa mutero. Nokuti ivo vashumiri vaMwari, nokumushumira iyi.
13:7 saka, Ipai vose chero ari chikwereti. mitero, vakanzi mitero akafanirwa; kwemari, uyo kwemari akafanirwa; kutya, uyo kutya akafanirwa; rukudzo, uyo rukudzo akafanirwa.
13:8 Unofanira nechikwereti hapana munhu, kunze kuti kudanana. Nokuti ani naani anoda muvakidzani wake azadzika mutemo.
13:9 Semuyenzaniso: Usaita upombwe. Usauraya. Usaba. Hamufaniri kutaura uchapupu hwenhema. Usachiva. Uye kana paine murayiro mumwe, zvinonzi kupfupikiswa mushoko iri: Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.
13:10 Rudo muvakidzani hakukuvadzi. saka, Rudo ndirwo plenitude murairo.
13:11 Uye tinoziva ino nguva, kuti zvino ndiyo nguva yokuti tive kusimuka pahope. Nokuti kare ruponeso rwedu rwava pedyo kupfuura patakatenda.
13:12 Usiku kwapfuura, uye zuva rava pedo. saka, tikande parutivi mabasa erima, uye mupfekedzwe zvombo chiedza.
13:13 Ngatifambei zvakavimbika, sezvo ari masikati, kwete kunwisa uye kudhakwa, kwete unzenza uye unzenza, kwete negakava negodo.
13:14 pachinzvimbo, ngavafukidzwe naIshe Jesu Kristu, uye musarongera nyama nokuchiva kwayo.
14:1 Asi kugamuchira vaya vasina kusimba mukutenda, pasina nharo pamusoro pfungwa.
14:2 Nokuti mumwe munhu anotenda kuti ungadya zvinhu zvose, asi kana mumwewo simba, ngaadye miriwo.
14:3 Uyo anodya ngaarege kuzvidza uyo haadyi. Uye uyo asingadi kudya havafaniri handimutongi anodya. Nokuti Mwari akagamuchira iye.
14:4 Ndiwe ani kuti utonge mushandi womumba womumwe? Iye anomira kana kuti anowa zvake Ishe. Asi Achamira. Nokuti Mwari ndiye anogona kumumisa.
14:5 Nokuti mumwe munhu anonzwisisa rimwe zera kubva chinotevera. Asi mumwe unonzvera kusvikira ose zera. Mumwe nomumwe kuwedzera maererano rake pfungwa.
14:6 Uyo anonzwisisa zera, anonzwisisa kuti Ishe. Uye uyo anodya, anodya nokuda kwaShe; nokuti anovonga Mwari. Uye uyo asingadi kudya, akasadya Jehovha, uye anovonga Mwari.
14:7 Nokuti hakuna mumwe wedu anozviraramira pachake, uye hakuna mumwe wedu anofa pachake.
14:8 Nokuti kana tichirarama, tinoraramira Ishe, uye kana tichifa, tinofa nokuti Ishe. saka, kana tichirarama kana kufa, tiri Ishe.
14:9 Nokuti Kristu akafa uye akamuka zvakare kuti chinangwa ichi: kuti ave mutongi wavose vakafa navapenyu.
14:10 Naizvozvo, nei kutonga hama yako? Kana nei munozvidza mukoma wako? Nokuti isu tose tichamira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu.
14:11 Nokuti zvakanyorwa: "Noupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura Ishe, ibvi rimwe nerimwe richandifugamira Vanokunga kwandiri, uye rurimi rwuchareurura kuna Mwari. "
14:12 uye saka, mumwe nomumwe wedu anofanira kupa tsananguro pachake kuna Mwari.
14:13 saka, tirege kuvazve kutonga mumwe nomumwe. pachinzvimbo, mutonge izvi mukuru pamwero: kuti haufaniri kuisa chipingamupinyi pamberi mukoma wako, kana omuendesa mukurasika.
14:14 Ndinoziva, pamwe chivimbo muna Ishe Jesu, kuti hapana chinhu chakasviba pachazvo. Asi kune uyo anofunga kuti chakasviba, haina kunaka kwaari.
14:15 Nokuti kana hama yako ichishungurudzwa nokuda kwezvokudya kwenyu, hamusi ikozvino kufamba maererano norudo. Musarega zvokudya zvako kumuparadza Kristu akafira.
14:16 saka, zvakanaka kuti isu hatifaniri kuva chikonzero amhura.
14:17 Nokuti umambo hwaMwari hahusi kudya nokunwa, asi zviri nani mutonge uye norugare uye mufaro, Mutsvene.
14:18 Nekuti uyo unobatira Kristu pazvinhu izvi, zvinofadza Mwari uye vaudzewo pamberi pevanhu.
14:19 uye saka, ngatiteverei zvinhu rugare, uye ngatirambei kune zvinhu nokuda pakuvaka mumwe.
14:20 Musava kuda kuparadza basa raMwari nekuda kwechikafu. zvechokwadi, zvinhu zvose zvakachena. Asi pane chakaipa kuti munhu akakugumbura nokudya.
14:21 Zvakanaka kurega kudya nyama uye kunwa waini, uye kubva chinhu hama yako unogumburwa, kana nokutsauswa, kana simba.
14:22 Une kutenda? Nderake iwe, saka kuiita pamberi paMwari. Wakaropafadzwa usingazvipi mhosva pachake kuti zvaakanga rakaidzwa.
14:23 Asi uyo anonzwisisa, kana achidya, kunoshorwa, nekuti haadyi nerutendo. Nokuti zvose zvisingabvi parutendo chivi.
15:1 Asi isu tiri vakasimba vanofanira kutakura kwekurarama vasina simba, uye kwete kuti afadze isu.
15:2 Mumwe nomumwe wenyu anofanira kufadza muvakidzani wake zvakanaka, kuvaka nekurudziro.
15:3 Nokuti kunyange Kristu haana kuzvifadza, asi sezvo zvakanyorwa: "Kutuka kwevakakutukai kwakawira pamusoro pangu."
15:4 Nokuti chero zvakanyorwa, yakanyorerwa kutidzidzisa, kuti, kuburikidza murefu uye kunyaradzwa Magwaro, tive netariro.
15:5 Saka dai Mwari wemoyo murefu uye kunyaradzwa ngaakubvumirei kuti vave nepfungwa imwe kune mumwe nomumwe, maererano naJesu Kristu,
15:6 kuti, pamwe nomuromo mumwe, iwe mukudze Mwari uye Baba vaShe wedu Jesu Kristu.
15:7 Nechikonzero ichi, kugamuchira mumwe nomumwe, sezvo Kristu akagamuchira iwe, muna rukudzo rwaMwari.
15:8 Nokuti Ndinoparidza kuti Kristu Jesu aiva gurukota yokudzingiswa nokuda chokwadi chaMwari, kuti asimbise zvivimbiso kumadzibaba,
15:9 uye kuti vaHedheni kukudza Mwari nekuda kwetsitsi dzake, sezvakanga zvakanyorwa: "Nokuda kwaizvozvi, Ndichaita kupupura iwe pakati pevahedheni, O Ishe, uye Ndichaimbira zita renyu. "
15:10 uye zvakare, anoti: "Farai, O vahedheni, pamwe nevanhu vake. "
15:11 uye zvakare: "All vahedheni, rumbidzai Jehovha; uye zvose marudzi, vanomukudza. "
15:12 uye zvakare, Isaya anoti: "Kuchava nomudzi waJese, uye anofanira kusimuka kutonga vahedheni, uye maari marudzi achava netariro. "
15:13 Saka Mwari wetariro akuzadzai ose mufaro uye rugare vanotenda, kuti muwedzere patariro uye kunaka Mutsvene.
15:14 Asi ndiri vamwe pamusoro pako, hama dzangu, kuti nemiwo kunge akazara norudo, kuvakwa nezivo yose, saka kuti iwe unogona kurairana.
15:15 Asi ini kukunyorerai, hama, zvikuru noushingi kupfuura vamwe, sokunge kukushevedzai kuti pfungwa zvakare, nokuda kwenyasha dzakapiwa kwandiri naMwari,
15:16 I kuitira kuti ave mushumiri waKristu Jesu kuvaHedheni, kutsvenesa Gospel raMwari, kuitira kuti nechipo vaHedheni anogona kuitwa chinogamuchirika uye vaitwe vatsvene Mutsvene.
15:17 saka, Ndine kukudzwa muna Kristu Jesu pamberi paMwari.
15:18 Saka ini Ungataura kwete kutaura chero zvinhu izvo Kristu hakurevi pave nokwandiri, kusvikira vahedheni vateerereswe, nezviito,
15:19 nesimba zviratidzo nezvishamiso, nesimba Mutsvene. Nokuti ichi nenzira, kubva kuJerusarema, padzimba nemakapoteredza, kusvikira IRIRIKUMU, Unokusuwa, ndakausimbisa vhangeri raKristu.
15:20 Uye saka ndakaparidza Gospel ichi, kwete apo Kristu aizivikanwa nezita, ndirege kuvaka pamusoro penheyo mumwe,
15:21 asi sokunyorwa zvakanyorwa: "Vaya akanga asina akazivisa anofanira kunzwisisa, uye vaya vasina kunzwa vachanzwisisa. "
15:22 Nekuda kwezvizvi, Ndakadzivirirwa kwazvo kuuya kwamuri, uye ndave kudziviswa kusvikira panguva ino.
15:23 Asi zvirokwazvo ikozvino, asina mumwe rwendo munharaunda idzi, uye wakati vaitova guru chido kuuya kwamuri mumakore akawanda apfuura,
15:24 kana ndatanga kuisa pamusoro wangu Sipania, ndinovimba kuti, sezvo I apfuure, Ndione iwe, uye ndingachema kutungamirirwa ikoko nemi, pashure wekutanga takatakura nezvibereko pakati penyu.
15:25 Asi inotevera Ndichasimuka Jerusarema, kundoshumira vatsvene.
15:26 Nokuti avo veMakedhonia neAkaya vakasarudza kuti muunganidzwa zviya varombo vatsvene vari paJerusarema.
15:27 Uye izvi vakafara nazvo, nekuti vari chikwereti yavo. For, kubva kuvaHedheni vagovani navo pazvinhu zvavo zveMweya, ivo vanofanira muishumire zvinhu zvenyika.
15:28 saka, kana ini vapedza basa iri, uye Akakanda kuti muchero uyu kwavari, I vanofanira kusimuka, nenzira iwe, kuna Spain.
15:29 Uye ndinoziva kuti kana ndichiuya kwamuri ndichauya usvike zvakawanda nemaropafadzo Vhangeri raKristu.
15:30 saka, Ndinokukumbirai, hama, kuburikidza wedu naIshe Jesu Kristu uye kunyange rudo Mutsvene, kuti imi kuzondibatsira neminyengetero yako kuna Mwari pamusoro pangu,
15:31 saka kuti ndive kusunungurwa kubva kutendeka vari muJudhiya, uye kuti nechipo basa rangu rigamuchirwe nevatsvene muJerusarema.
15:32 Saka ndiuye kwamuri nemufaro, nechido chaMwari, uye saka dai ini ndivandudzwe pamwe nemwi.
15:33 Zvino Mwari werugare ngaave nemwi mose. Amen.
16:1 Zvino ndinokurumbidzai kwamuri hanzvadzi yedu Febhi, vari ushumiri chechi, iri paKenikireya,
16:2 kuti mugamuchire naye muna Ishe nepakunaka kwevatsvene, uye kuitira kuti muve kubatsira naye chero basa iye achava basa newe. Nokuti iye pachake rave vaibatsira zhinji, uye iniwo.
16:3 Kwazisai Prisira naAkwira, Vabatsiri angu muna Kristu Jesu,
16:4 vakaisa mitsipa yavo akamiririra hwangu, vandinoda Kuvonga, kwete ini ndoga, asiwo nekereke dzose dzavaHedheni;
16:5 uye musakwazisa kereke iri paimba yavo. Kwazisai Epaenetus, mudiwa wangu, ndiani pakati zvezvitsva Asia muna Kristu.
16:6 Kwazisai Maria, wakabata zvikuru pakati penyu.
16:7 Kwazisai Andronikasi naJuniyasi, dzangu uye nevamwe vasungwa, vane anokudzwa pakati vapositori, uye vaiva Kristu anditangira.
16:8 wo Amupiratasi, vakawanda Mudiwa kwandiri munaShe.
16:9 Kwazisai Obhano, mubatsiri wedu muna Kristu Jesu, naStako, mudiwa wangu.
16:10 Kwazisai Apere, akaedzwa muna Kristu.
16:11 Kwazisai vari kubva mumhuri Aristobulus. Kwazisai okwaana Herodhi, hama dzangu. Kwazisai vari mumhuri yokwaNakisasi, vari munaShe.
16:12 Kwazisai Trufaina naTrufosa, vanobata muna Ishe. Kwazisai Pesisi, vakawanda vanodiwa, wakabata zvikuru muna Ishe.
16:13 Kwazisai Rufusi, vasanangurwa muna Ishe, uye mai vake nevangu.
16:14 Kwazisai Asingiritasi, Firegoni, naHerimasi, Patrobhasi, Hermes, uye hama dziri navo.
16:15 Kwazisai Firorogosi naJuria, NaNerea nehanzvadzi yake, naOrimba, uye navatsvene vose vanavo.
16:16 Kwazisai nokutsvoda kutsvene mumwe. Kereke dzose dzaKristu dzinokukwazisai.
16:17 Asi Ndinokukumbirai, hama, kucherechedza vanoparira kukakavadzana uye zvigumbuso, zvinopesana nedzidziso dzamakadzidza, uye kuti ubve kwavari.
16:18 Nokuti vakadaro sezvo izvi havasi kushumira Kristu Ishe wedu, asi avo nowemukati, uye, kuburikidza nemashoko anofadza uye kutaura nounyanzvi, Vanonyengedza mwoyo mhosva.
16:19 Asi nokuteerera kwenyu zvakaziviswa munzvimbo dzose. uye saka, I akufarireiwo. Asi ndinoda kuti muve vakachenjera pane zvakanaka, uye zviri nyore pane zvakaipa.
16:20 Uye Mwari worugare kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi.
16:21 Timothy, yangu navo Mushandi, anokukwazisai, naRukio uye Jason uye Sosipater, dzangu.
16:22 ini, wechitatu, tsamba iyi, vanokukwazisai munaShe.
16:23 Gaius, hondo yangu, uye chechi yose, anokukwazisai. Erastosi, wehomwe guta, anokukwazisai, uye Quartus, hama.
16:24 Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi mose. Amen.
16:25 Asi kune uyo anogona akusimbisei maererano Gospel yangu nekuparidzwa kwaJesu Kristu, maererano nokuzarurwa kwechakavanzika chakanga chakavigwa kubvira kare kare,
16:26 (iyo zvino chakaiswa pachena kuburikidza neMagwaro ravaprofita, maererano murayiro waMwari wekusingaperi, kusvikira pakuteerera kwerutendo) iyo yakaitwa pakati zvose vahedheni:
16:27 kuna Mwari, woga wakachenjera, kuburikidza naJesu Kristu, ngaave nokukudzwa nokubwinya nokusingaperi-peri. Amen.